बिग समाचार – Page 37 – BIG FM 101.2 MHz
Home » बिग समाचार (page 37)
एफएमको स्रोता झन् बढेका छन्, बिग आईकनले यसको पुष्टी गर्छ: महेश भण्डारी
महेश भण्डारी, अध्यक्ष, बिग एफएम १०१.२ मेगाहर्ज, न्यूरोड पोखरा । बिग आईकन पाँचौ सँस्करणसम्म आईपुग्दा यसको उचाई निकै माथि पुगिसकेको छ । मोफसलबाट निरन्तर पाँच पटकसम्म भएको यो रियालिटि शो नेपालमै पहिलो हो । र, सबैभन्दा बढि पुरस्कार राशि भएको प्रतियोगिता पनि विग आईकन हो । यसका साथै विग आईकनमा प्रतिस्पर्धाका लागि आउने प्रतिस्पर्धीहरु पनि वर्षेनी थपिँदै गएका छन् । यहि कुराले विग आईकनको …
सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड निओ बिग आईकनः चौथो चरणको अडिसनका लागि ४७ जना छनौट
रेम बिक पोखरा, २५ असार । सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो विग आईकन २०१४ को तेस्रो चरणको अडिसनबाट ४७ जनाले चौथो चरणका लागि प्रवेश पाएका छन् । दोस्रो चरणबाट छनौट भएका कुल ८३ जना सहभागिमध्येबाट उनीहरुले अघिल्लो चरणको लागि कार्ड प्राप्त गरेका हुन् । चौथो चरणको अडिसन असार २७ गते हुने एफएमका कार्यक्रम संयोजक संजोग बस्यालले जानकारी दिएका छन् । यसअघि …
सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड निओ बिग आइकनको तेस्रो चरणको अडिसन बुधबारदेखि
बिग न्यूज, पोखरा, २४ असार । सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड निओ बिग आईकन २०१४ मा तेस्रो चरणको अडिसन बुधबारबाट सुरु हुदैछ । पहिलो र दोस्रो चरण पार गरेका प्रतियोगिको बिच अघिल्लो चरण प्रबेशको लागि बुधबार बिहान ८ बजेदेखि अडिसन सुरु हुने कार्यक्रम संयोजक सञ्जोग बस्यालले बताए । पोखराको न्यूरोड स्थित स्काई टच रेष्टुरेण्ट एण्ड लाउन्ज बारमा हुने तेस्रो चरणको अडिसनमा ८३ जना सहभागि …
सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो विग आईकन २०१४, पहिलो चरणको समाप्तिसँगै १४६ दोस्रो चरणमा
बिग न्यूज पोखरा, २० असार । सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो विग आईकन २०१४ अन्तरगत पहिलो चरणको अडिसन सम्पन्न भएको छ । शुक्रवार सम्पन्न अडिसनबाट १ सय ४६ जना दोस्रो चरणको लागि छनौट भएका छन् । पश्चिमाञ्चलकै नम्बर वान एफएम बिग एफएमले आयोजना गरेको खुल्ला एकल गायन प्रतियोगिता बिग आईकनको पाचौ संस्करणमा आबेदन फारम भरेका ८ सय ९० मध्य पहिलो चरणको अडिसनमा ८ …
सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो विग आईकन २०१४ तेस्रो दिनसम्म १ सय ३७ जना छनौट
बिग न्यूज पोखरा, १९ असार । सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो विग आईकन अन्तरगत पहिलो चरणको तेस्रो दिन सम्म एक सय ३७ जना दोस्रो चरणमा प्रबेश गरेका छन् । पहिलो चरणको तेस्रो दिनको अडिसनमा बिहिवार दुई सय ५३ जनाले गायन प्रस्तुत गरेकोमा ४५ जनाले दोस्रो चरण प्रबेशको लागि ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न सफल भए । तीन दिनमा कुल ७ सय ६५ जनाले गायन प्रस्तुत …
सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो विग आईकन २०१४ दोस्रो दिनसम्म ९१ जना छनौट
रेम बिक पोखरा, १८ असार । सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो विग आईकन अन्तरगत पहिलो चरणको दोस्रो दिनको अडिसनमार्फत ४० जना प्रतिस्पर्धीहरुले अघिल्लो चरणका लागि हरियो कार्ड प्राप्त गरेका छन् । पहिलो चरणको अडिसनको दोस्रो दिन २ सय ८० जनाले सहभागिता जनाएका थिए । दुई दिनसम्म गरेर कुल ९१ जना प्रतिस्पर्धीहरु दोस्रो चरण प्रवेश गरे । दुईदिनसम्म ५ सय १२ जना प्रतिस्पर्धीहरुले …
सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो बिग आईकन शुरु, पहिलो दिन ५१ जना छानिए
रेम बिक पोखरा, १७ असार । सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड नियो बिग आईकन २०१४ मंगलबारदेखि शुरु भएको छ । मंगलबारदेखि शुरु भएको पहिलो चरणको अडिसन अन्तरगत पहिलो दिन २ सय ३२ जना गायन प्रतिभाहरुले अडिसनमा सहभागिता जनाए । पहिलो दिनको अडिसनमार्फत ५१ जना गायन प्रतिभाहरुले मात्रै दोस्रो चरणका लागि हरियो कार्ड प्राप्त गरेका छन् । पहिलो चरणको अडिसन मंगलबार सहित चार दिनसम्म चल्ने एफएमले जनाएको …
बिग आइकन २०१४ को अनलाइन पार्टनर: कस्तो रमाइलो डट कम
सामसङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड निओ बिग आइकन २०१४ को अनलाइन पार्टनरको रुपमा कस्तो रमाइलो डट कम आबद्ध भएको छ । कस्तो रमाईलो डट कम र भिजुयल जोन प्रा. लि. का प्रबन्ध निर्देशक सञ्जु सुनार र बिग एफ एम १०१.२ मेगाजर्हका अध्यक्ष महेश भण्डारीबीच हालै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भई सहमती भयो । सामसङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड निओ बिग आइकन २०१४ का सम्पूर्ण अडिसनका …